Heat in the Heartland: Saamaynta isbeddelka cimilada ee Dhulka Dhexe
Usbuucii hore Minneapolis, boqollaal qof ayaa isugu soo ururay Naadiga Dhaqaalaha Minnesota, kaas oo bixiya barxad aan dawli ahayn oo loogu talagalay ganacsiga, xukuumadda, iyo hoggaamiyeyaasha siyaasadeed ee dawladda si loo soo bandhigo fikradaha ku saabsan sida Minnesota ay ugu tartameyso dhaqaalaha adduunka. Guriga la buuxiyey wuxuu isugu yimid siideynta qaranka Heat in the Heartland: Khatarta Isbeddelka & Khatarta Dhaqaale ee Gobollada Dhexe, warbixin cusub oo ay maalgeliso qaybta by The McKnight Foundation.
Iyada oo falanqaynta warbixinta ay tahay gadaal ka riixida, saraakiishii caanka ahaa ee warshadaha Greg Page (gudoomiyaha fulinta ee Cargill) iyo Henry Paulson (gudoomiyihii hore ee Goldman Sachs exec iyo xoghayihii hore ee maaliyada) ayaa hoosta ka xariiqay khataraha naxdinta leh ee ku wajahan ganacsatada Midwest jawi isbadal ah. Sida lagu xusay cilmi baarista, natiijooyinka gobolka waxaa laga yaabaa inay kujiraan isbeddelada qaababka beeraha, wax soosaarka lumay, iyo dambiyada sii kordhaya. Warbixintu waxay ku saleysan tahay xog furan oo u oggolaaneysa akhristayaasha xiiseeya inay aad u degaan, oo sahamiyaan saameynta ay ku yeelan karaan magaalooyin gaar ah sida Minneapolis / Saint Paul.
Hal dhibic, Bogga wuxuu xasuusiyay daawadayaasha in xalalka laga heli karo kumanaan "go'aano yaryar" ay sameeyeen shaqsiyaadka iyo hay'adaha, taas oo iga dhigtay inaan fekero. Inkastoo hannaanka aragtida aragtida iyo abaabulidda ganacsiga ee baahsan ay muhiim u yihiin isbedelka mustaqbalka yar yar, sida muuqata tallaabooyinka maalgashiga hay'adaha maaliyadeed ee yar yar ayaa sidoo kale leh fursado kubbadda barafka.
Waxaa la aasaasay toban sano ka hor, mashruuc caalami ah oo la yiraahdo CDP wuxuu weydiistay shirkadaha inay sannad walba ka soo warbixiyaan waxqabadka gaaska aqalka dhirta lagu koriyo iyo istiraatiijiyadda cimilada iyagoo ka jawaabaya su'aalo is daba-joog ah. Waxay ahayd fikrad wanaagsan, iyo koox yar oo ah maalgashadeyaal isku fikir ah oo isku fikir ah ayaa sameeyay ballanqaad rasmi ah oo xogta ku saabsan waxqabadka cimilada iyo istiraatiijiyadda ay ku quudinayso go'aan qaadashada maalgashi, iyagoo siinaya CDP dhagaysi ballaadhan oo soo jiidasho leh iyo ujeedo dhab ah. Taageeridda CDP waxay ahayd - oo weli ah - ficil fudud oo loogu talagalay maal-gashadayaasha hay'adaha. Kaliya waxaad ku dari doontaa magacaaga iyo hantidaada isku darka. Ujro la'aan. Balanqaad maleh. Ma jiro heshiis weyn.
Laakiin isku dar "Tallaabooyin yaryar" sida sidan oo kale, fiiri ...
Dhamaadka 2014, CDP waxaa taageeray in ka badan 822 saxiixayaal kuwaas oo matalaya in ka badan $ 95 trillion hantida. (Taasi waa trillion oo leh "T".)
Iyo marka maalgeliyeyaashu ay ku hadlaan, shirkadaha dhagaysan. Maanta, in ka badan 5,000 oo shirkadood oo ganacsi ah ayaa ka jawaabaya macluumaadka CDP ee ku saabsan isbedelka cimilada, tamarta, biyaha, iyo dhirta. Marka xogta la gaaro tiro xaddidan waxay u ogolaataa maalgashadayaasha fal - Kobcinta alaabooyinka isweydaarsiga iyo kala xulashada shirkadaha iyo doolarka tooska ah. Macluumaadka tooska ah ee McKnight, xogta CDP waxay ku saleysantahay Istaraatijiyadda Wax-qabadka Carbon Mellon Capital kaas oo miisaan culus iyo shirkadaha hoosta ku jira ee Russell 3000 oo ku salaysan qiiqa aqalka dhirta lagu koriyo iyo diyaargarowga cimilada ee maamulka shirkadaha ee qaybaha. Istaraatiijiyaddani waxay hoos u dhigeysaa profile-ka Qalabka McKnight ee a $ 100 milyan oo maal-galin ah oo ka badan 50%, marka loo eego qiyaasta calaamadaha caadiga ah. Waxaa la ogaanayaa sida tallaabooyinka yaryar ee qaar ka mid ah maalgashadayaashu ay u suurtageliyeen Mellon Capital inay qaataan "macro-talaabo ".
Thanks to Greg Page, waxaa la xusuusiyay awoodda yar ee ficillada yaryar ee aasaasiga ah, aasaasay, iyo maalgashadayaasha hay'adaha. Sababtoo ah xogta ku saabsan waxqabadka cimilada iyo istaraatiijiyada sameeyo u sheeg go'aanka McKnight ee go'aanka, waxaan si daacadnimo ah u taageersanahay CDP. Haddii aad matalayso maalgeliye hay'adeed si aad u raadisid ficilo yaryar oo isku dhafan waqti dheer, CDP waa hindise lagu qiimeeyo.